Ọrịa Coronavirus Na-akụrisị insdọ mmiri! | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulỌrịa Coronavirus Na-akụrisị insdọ mmiri!
26 / 03 / 2020 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Ọrịa coronavirus na-agbaji ụdọ n'usoro
Site na ntiwapụ nke Coronavirus, anyị ahụla nke ọma otú arụ ọrụ (ngbankwu ọkụ chọrọ) si apụta na ụdọ ndị ọkọnọ. Productsfọdụ ngwaahịa abụrụla nke a na-anaghị ahụ anya, shelves ahịa adịghị na ọnụ ahịa ọnụ ahịa ha amụbaala okpukpu abụọ. Factlọ ọrụ mmepụta ihe kwụsịrị n'ihi nsogbu akụkụ akụkụ. Steeti emeela atụmatụ ndị ọzọ iji chebe ndị na - emepụta ihe. N'aka nke ọzọ, enweela mgbawa na e-azụmahịa. Nwepụ ọrụ wegharala nke ukwuu.
Anya anụ ahụ abụrụla ihe dị mkpa. Ekwesịrị ịwepụta ụdọ ahụike nwa oge ọsọsọ. Zọ TIR kwụsịrị na oke yana ọdụ TIR guzobere. Ndị ọkwọ ụgbọala bidoro itinye oge ichekwa ụbọchị iri na anọ. Na njem njem RO-RO, ndị ọkwọ ụgbọ ala enweghị ike iji ụgbọ elu ebuga ya ma belata oge ọnụnọ ha na European Union. Ekpokọtalarị ụkọ ọkwọ ụgbọala ugbua. N'ihi ihe mgbochi nke ụgbọ njem, ibu na-ebugharị ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri. Enwere mmụba dị ukwuu n'ọchịchọ ha. N'ihi eziokwu na enweghi ike iwepu ihe mbubata na mmiri n'oké osimiri, mgbe ọ dị mkpa maka arịa enweghị ohere abawanye na ọdụ ụgbọ mmiri mbupụ, ọnụahịa ndị ahụ mụbara site na ọnọdụ nke mmanụ dị ọcha. Edere iwu ngwa ngwa maka ụgbọ elu. Agbanyeghị, n'ihi ịkagbu ụgbọ elu ndị njem, ikike ibu belatara nke ukwuu wee malite inye ndopụ izu ka oge na-aga. Oge njem agafeela n'ihi arụmọrụ ụgbọ ala na-agafe n'okporo ụzọ ụgbọ oloko. N’ihi nke a, etipula ígwè eji ebu ihe? Ee. Enwere ike igbochi mmetụta nke oke ngbanye n'ime ụdọ mbugharị site na ịmekọrịta eriri ọkọnọ. Ọsọ ọsọ na ezigbo ozi nzipụta bụ ihe kachasị mkpa. Dị ka Healthtù Ahụ Ike sayswa na-ekwu: "nnwale, nnwale, nnwale". Ndị otu na-ebubata ngwa ahịa kwesịrị ịkwado n'ihu maka mgbasa ozi ngwa ngwa ma na-emekọ ihe ọnụ iji kwado azụmahịa. Ihe ngwọta dị n’etiti mmadụ adịghị ezu.
Usoro anyị nọ n’ime ya egosiwo anyị ọzọ mkpa ịdị mkpa nke lọjistik. Anyi ahurula ihe kpatara oru ihe di nkpa iji nye oru kwesiri ntukwasi obi ma dika esi agbagide ndi mmadu n’onodu ahu ike ma mekwa ka ihe ndi mmadu ghara idi. Ya na mgbe ọ na-alọta, a ga-emerịrị ihe ndị dị mkpa ndị na-enweghị ike ịpụ.
Ego a na-enweta n’onyinye bu nchikota nke ahia, ahia na onu ahia. Nkwubi okwu anyi sitere na ihe ndi mere n’oge na-egosi na anyi kwesiri iguzobe ihe mgbochi ndi ozo ga enye ndi ozo ike ma mata ihe di iche na ihe ojoo. Anyị kwesịrị ịchọta ụzọ azụmaahịa azụmaahịa na-enweghị kọntaktị n'oge oge ọrịa. N'oge a, itinye ego nke akụrụngwa ga-eme ka azụmaahịa mba ọzọ dị na okporo ụzọ bụrụ ihe dị mkpa. O doro anya na mgbanwe ọkwọ ụgbọ ala na njedebe, ngbanwe akpa (juputara nju, zuru oke), mgbanwe ọkara na-adọkpụ na usoro ịgba ngwa ngwa ka etolite. A ghaghi kee mpaghara buffer maka nke a. Ekwesịrị ịbanye n'okporo ụzọ ndị ọzọ na ọnụ ụzọ ókèala ga - eleba anya na ngwa ngwa inye ọrụ ngwa ngwa kwesịrị iburu n'uche. Mba dị iche iche nwere tolling dị iche iche na ụzọ dị iche iche. Enwere ike ịmepụta ụzọ dị mma site na nkwekọrịta nwa oge na mba ndị a.
Ekwesịrị wezuga oge ịkpọpụ ụbọchị iri na anọ na ndị na-anya ndị ọkwọ ụgbọ ala na nbata ala ahụ ngwa ngwa o kwere mee na ekwesịrị ịhapụ ụzọ mbata / ụzọ ọpụpụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala Turkey na ndị mba ọzọ na ngwongwo ule. Ekwesịrị imekwuwanye oge oge ọnụnọ ndị ọkwọ ụgbọ ala na mba EU. Ekwesịrị ịtụle ngwa ọrụ ndị ọkwọ ụgbọala dị ka ihe dị mkpa yana ihe ga - agbatịkwu visa ọhụụ site na ịgbatị oge ahụ. Site na nhazi nke ụlọ ọrụ ndị dị mkpa, o kwesịrị ibipụta nnabata ndị aga-etinye n'ọrụ oge ọrụ na oge izu ike, nke na-agaghị emetụta nchekwa ahụ, na ịkwesịrị ịgbatị oge dịka ọ dị mkpa. Iji mee ka usoro azụmaahịa dị mfe nke mbupụ mmiri, a ga-akwụsị itinye ngwa ahịa nke Verified Gross Weight (VGM), ndị ọrụ ụgbọ mmiri kwesịrị ịrịọ akwụkwọ ozi nke nkwa n'aka ụlọ ọrụ na-ezipụ ha. Ekwesịrị ịtụleghachi usoro ịkwọ ụgbọala / ibu yana ịkwado ndị ọkwọ ụgbọala na ụlọ ọrụ dị mfe ma mee ka ọ dịkwuo mfe. Ekwesịrị ime atụmatụ maka inye ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ ọrụ na njem ụgbọ elu ụwa (ọzụzụ, ule, asambodo), na ntanetị nke ụfọdụ ọzụzụ SRC na ADR.
Ọrụ mgbanwe na ndị ọrụ obodo na-eme ka usoro azụmahịa dịkwuo ogologo. Kama nke ahụ, ekwesịrị ịgbanye usoro a ọsọ ọsọ site na n'ịhụ n'iji usoro enweghị akwụkwọ na usoro kwesiri iji mee ihe iji gbochie ịhapụ ọrụ na ọkwa ọ bụla. N'ime ngwugwu a mara ọkwa, enweghị nkwado pụrụ iche maka mpaghara lọjistik, nke ntiwapụ na-emetụta nke ukwuu, belụsọ na nkwupụta nkwanye ụgwọ VAT na-egbu oge maka ọnwa 6. E nyelarị ngalaba 16 aka. N'oge a, a ga-ewepụ SCT na mmanụ, nke bụ ihe dị mkpa maka lọjistik, ekwesịrị ịnye ọrụ ahụ n'ọnọdụ ka mma.
Dịka usoro nke oge, anyị ga-ekpebisi ike ịnweta ụzọ ụgbọ ala na-ejikọ okporo ụzọ mba ụwa niile na-ekpuchi obodo anyị na ebe a ga-ehiwe ntọala / ụlọ ga-ejide onwe anyị iji belata ngwongwo ma belata ihe egwu.
Enwere ụlọ ọrụ dị iche iche na obodo anyị na agbụ nke njikọta ụwa niile. Mba ndị dị na ọdịda anyanwụ achọghị ịmị ngwaahịa ụfọdụ na mba nke ha. Turkey na-eto eto na mbupụ na-abara development nlereanya. Agbanyeghị, anyị kwesịrị ịtụle eziokwu ahụ bụ na anyị na-adabere na akụrụngwa. Ya mere, anyị kwesịrị ịkọwa nsogbu ndị anyị na-enwe ugbu a n’inweta ma nweta akụrụngwa ndị a nke ọma ma lekwasị anya na isi ihe ebe a. Ụfọdụ ngwaahịa na-adịghị emepụta na Turkey. Yabụ, anyị ga-anọrịrị n'ụdị n'usoro ọkọnọ ụwa niile.
Ihe dị mkpa bụ ịgbakọ ihe egwu niile ma mee usoro dị mkpa. Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ nhazi nke ọma yana n'esepụghị aka n'usoro usoro ọkọnọ na ngwa agha ma mee ka usoro njikwa nsogbu anyị sie ike obere oge. Yabụ na anyị ga-achọ ụzọ anyị ga-esi gbanwere ihe atụ si n'otu ebe ana-eweta ya ka ọ dị ka ihe atụ. Anyị kwesịrị iwepụta ngwaahịa ndị mepere emepe na mba anyị.
N’ihi nke a, mkpa nke oke nhọrọ na ịdị ike n’agbụ n’arụpụtala. A ghọtara na ekwesịrị ikpebi nhọrọ ndị ahụ na usoro ngwa agha na mmepụta ya, aga-enyocha ihe omume ga - agbanwe na nke kacha mma kwesịrị iji dịka ọnọdụ ahụ siri dị.
prọfesọ Dr. Mehmet TANYAŞ
Onye isi oche Njikọ Njikọ (LODER)
Egwu Coronavirus abawanye okporo ụzọ Bursa!
Chepụtara ma wuo n’etiti Istanbul-Ankara na elu ụgbọ elu Geyve-Sapanca…
Evraz na Rụnye okporo ụzọ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Russia maka Afọ Ise
Ansteel na-enye okporo ígwè dị arọ maka ụgbọ okporo ígwè okporo ígwè Harbin-Dalian
Ansteel na-enye okporo ígwè dị arọ maka okporo ígwè okporo ígwè Harbin-Dalian
Tibnor na-enye ígwè maka ugbo ígwè ígwè LKAB
Siemens na-enye ndị catenaries nke Metro Lines na Doha, Qatar.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 26 March 1918 na Hejaz Railway
Nri maka Ahụike Ahụike si Izmir Metropolitan